बालबालिकालाई सुमार्गमा डोहोर्याउने काइदा - News Today
Date: २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:१८
कमला–(जम्ला हात गर्दै) नमस्कार ! म यस चौधरी परिवारकी एक सदस्य कमला आजको साप्ताहिक पारिवारिक सभाको उद्घोषण गर्ने अनुमति चाहन्छु । (सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्दछन् ।)
बन्द सत्रमा भने खुला सत्रमा प्रस्तुत वैयक्तिक समीक्षात्मक प्रतिवेदन बारे टिकाटिप्पणी गर्ने र प्रमुख अतिथिलाई साक्षी राखी परिवारका सदस्यहरूको वैयक्तिक आचार संहिता÷प्रतिबद्धता समेटिएको सामुहिक रूपमा नयाँ प्रतिवेदन निर्माण हुन्छ । सबैले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदन फाइलिङ गर्नु पर्दछ । प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रतिबद्धताहरू पालना गरे नगरेको बारे आउँदो सभाले मूल्याङ्कन गर्ने छ ।
कमलेश–(लिखित समीक्षात्मक प्रतिवेदनको सहारा लिँदै) आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, परिवारका सदस्यहरू ! सभामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ ।
कविता– (कागज हेर्दै) धन्यवाद उद्घोषकज्यू ! श्री सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू तथा सहभागी सदस्यज्यूहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन !
मैले परिवारका सदस्यहरूको खानपिन, सरसफाई र रेखदेखको कार्य जिम्मेवारीका साथ समापन गरेकी छु । जेठी छोरी कमलालाई सभा सञ्चालन र पढाइ–लेखाइमा पर्याप्त मार्गनिर्देश गरेकी छु । कमजोरी पक्ष नभएका होइनन् । मेरो अर्को जिम्मेवारी स्वाध्यायन गर्नु थियो । ‘आजको साप्ताहिक’, ‘शिक्षक’, ‘मधुपर्क’ र ‘गरिमा’ जस्ता शैक्षिक÷साहित्यिक पत्रिका अनि केही उपन्यास पढ्नमा समय दिए पनि मैले शिक्षा सेवा आयोगको तयारी गर्ने सन्दर्भमा उचित ध्यान दिन सकिनँ । पटक–पटक छोरीहरू कमला र कुसुम आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदा भने ठीक मार्गमा ल्याउने उद्देश्यले मानसिक कसरत गर्नुप¥यो । यद्यपि मानसिक÷शारीरिक दण्ड भने विल्कुलै दिएको छैन ।
कमला– हार्दिक धन्यवाद कविताज्यू ! अब म कमला स्वयम् सहभागी सदस्यका रूपमा आफ्नो साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
यस सभामा सभाध्यक्षज्यू, कार्य व्यस्तताका बाबजुत हाम्रो निमन्त्रणा स्विकारेर पाल्नुभएका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू तथा अन्य सदस्यहरू !
मम्मीलाई घरायसी कामकाजमा सघाउन र परिवारमा शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने कार्यमा भने पक्कै कमजोरी देखाएँ । साथीहरूको लहैलहैमा लागेर दौडधुपमा मन लगाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा कसर राखेको महसुस हुँदा लज्जित छु । आगामी हप्तामा यस खाले कमजोरी नदोहो¥याउने बाचा गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु । धन्यवाद ! (ताली बज्छ ।)
कमलेश– जिल्ला बाहिरको जागिरका कारण म हप्ताभरि परिवारबाट टाढिन्छु । हरदम परिवारकै भलोका बारेमा सचेत हुँदै कर्म मैदानमा डटेर लाग्छु । यहाँ तिमीहरू भने आप्mनै सीप र क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान दिन पछि पर्छौ । अनि कसरी आर्थिक समुन्नतिको खुट्किलो उक्लन सकिन्छ ? यस महंगीमा एक जनाले कमाएर केही बचाउन सकिन्न । कमलाले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा तल पर्नु भएन । कुसुमले उचित माया–ममता पाउनुप¥यो ।
कमला–(सकस मान्दै) मम्मी हर्दम पढ्, पढ् भन्नुहन्छ । उहाँलाई चाहिँ पढेको देख्तिनँ । फेरि खेल्ने र टेलिभिजन हेर्ने मन कुन बच्चालाई हुन्न र ! समय निर्धारण गरिदिए म सोहीबमोजिम काम गर्ने थिएँ ।
कविता– (कमलातिर हेर्दै) ल, ल ! तिमीलाई खेल्ने, लेखपढ गर्ने रटेलिभिजन हेर्ने समय तोकिदिन्छु । त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न पछि नपर्नु नि ? सम्भव भएसम्म अबदेखि म पनि तिमीसँगै बसेर पढ्छु, हुन्न ?(कमला स्विकारोक्तिस्वरूप टाउको हल्लाउँछिन् ।) म्याथ सुधार्न भोलिदेखि नै म्याथ सरकहाँ ट्युशन पढ । यस बारे म पनि उहाँसँग छलफल गर्छु ।
कमलेश– (कमलातिर फर्केर खुशी हुँदै) स्यावास छोरी !मनका कुरा हाम्रासामु राख्ने जमर्को ग¥यौ । खुशी लाग्यो । दुबै सन्तानको मनोकाङ्क्षा बुझेर काम गरी सक्षम नागरिक बनाउन प्रयत्नशील छौँ । हामी आफ्ना अप्रिय बानी र सोच परिवर्तन गर्दै युगानुरूपका अभिभावक बन्न इच्छुक छौँ । एउटा कुरा बुझ, आर्थिकरूपमा हामी मध्यम वर्गीय परिवारमा पर्ने भएका कारण मैले खेलकुदका सामग्री किन्नमा मन लगाइनँ । ठीक छ । आउँदो हप्ता म क्यारेम बोर्ड किनिदिन्छु । त्यसले औँलाको कसरत गर्न र होसियार हुन पनि सघाउँछ । औँलाको कसरतले राम्रा अक्षर र चित्र बनाउन सहयोग पुग्छ । मम्मीले तोकिदिएको समयसीमामा रहेर काम गर्नू । म केही न केही नयाँ कुरो दिँदै जाने वचन दिन्छु । तिमी पनि आफ्नो वचनमा पक्का हुनू नि ?
कविता– मलाई विश्वास छ, यत्ति राम्रो र व्यवस्थित उद्घोषण कला देखाउने हाम्री कमलाले मान्यवरको मन दुखाउने काम कदापि दोहो¥याउने छैनन् ।
कमला–(प्रसन्नता देखाउँदै) धन्यवाद बाबा–मम्मी ! म हजुरहरूको विश्वासलाई जीवन्त बनाउन यसै घडीबाट कर्मपथमा जुट्छु । (सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्दछन् । कविता निष्कर्षलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्दछिन् । )
अब भने आजको सभाको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदनका साथै आगामी कार्यविभाजनको प्रस्ताव सभामा पेस गरी पारित गर्न र सभा विसर्जन गरिदिन सभाध्यक्षज्यूलाई अनुरोध छ । अन्त्यमा, उद्घोषकको भूमिका निर्वाह गर्ने सौभाग्य दिनुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म भने विदा हुन्छु । धन्यवाद !
कमलेश– आदरणीयप्रमुख अतिथि तथा परिवारका सदस्यहरू ! आगामी हप्ताको लागि सभाध्यक्षको भूमिकामा कविता, अन्य सहभागी सदस्यको भूमिकामा कमला र कुसुम साथै उद्घोषकको भूमिकामा कमलेश रहने अनि प्रमुख अतिथिको भूमिकामा हाम्रो परिवारका हितैषी कौशल शर्मालाई अनुरोध गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्ने प्रस्ताव राख्दछु । साथै, कविताद्वारा हस्तलिखित आजको सभाको निष्कर्ष समेटिएको सामुहिक प्रतिवेदन पढी थपघट गर्न अनुरोध गर्दछु । (सबैले प्रतिवेदन पढ्छन्, सुधार गरी हस्ताक्षर गर्छन् र ताली बजाएर पारित गर्दछन् ।)
Previous : सप्तरीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या उच्च
Next : दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्धः मुख्यमन्त्री राउत